Fiantsoana hihetsika - mihoatra ny bokotra fotsiny eo amin'ny pejin-tranonkalanao | Martech Zone
Fiantsoana hihetsika - mihoatra ny bokotra fotsiny ao amin'ny pejin-tranonkalanao
Alakamisy Oktobra Oktobra 1, 2015 Alakamisy Oktobra Oktobra 1, 2015 Dustin Clark
Efa naheno ireo mantra, teny filamatra ary teny filamatr'ireo mpivarotra ao anatiny ianao hatraiza hatraiza: “Mpanjaka ny atiny! ”Amin'ny vanim-potoanan'ny varotra nomerika entin'ny mpanjifa, finday, ary afovoany afovoany, ny atiny dia saika ny zava-drehetra. Saika malaza toa ny HubspotNy filozofia Inbound Marketing dia antony iray hafa nahatonga azy ireo tompon'andraikitra: ny fiantsoana andraikitra na ny CTA.
Fa maika ny hanao ny zavatra tsotra ary atsangano amin'ny tranokala izany! aza atao ambanin-javatra ny sakany a miantso-to-hetsika tena izy. Izany dia mihoatra ny bokotra mora ampiasaina fotsiny - marani-tsaina na tsia - izay mipetraka ao amin'ny mailakao, bilaoginao ary pejy fandraisana ary mitondra ny mpampiasa mankany amin'ny toerana tianao haleha.
Tamin'ny famoahana vao haingana, Torolàlana ho an'ny fampiroboroboana atiny, Element Three (ny mpampiasa ahy) dia nanisy antsipiriany ny fomba fiasa amin'ny haino aman-jery miangona - izany hoe amin'ny fampiasana haino aman-jery manana, karama ary karama - hampiroborobo ny atiny dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny atiny. Ao amin'ny e-book, manazava amin'ny antsipirihany ny fomba maha-zava-dehibe ny haino aman-jery sy ny bokotra CTA ho fampiroboroboana.
Saingy misy mihoatra ny CTA fa tsy bokotra sy sora-baventy fotsiny. Vakio hatrany raha hianatra ohatra miafina telo hafa momba ny fomba ahafahanao mamorona antso-to-hetsika mpamono olona hampiroborobo ny atiny.
Mandoa vola hilalao
Tsy mahagaga raha haino aman-jery mandoa fomba mahomby hahitana maso vaovao momba ny atiny - tao anatin'ny fitsapana fanaraha-maso iray niaraka tamin'ny orinasa fiantohana ara-pahasalamana, ny E3 dia nahitana fitomboan'ny fifamoivoizana efa ho 800% noho ny fampisondrotana karama fotsiny! Saingy rehefa manohy mampiasa fantsona karama - PPC, fampisehoana, fanamarihana ary ara-tsosialy ireo mpivarotra - singa iray izay matetika tsy voadinika dia ny hafatra.
Ny doka nataonao dia iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra amin'ny ezaka ataonao - na doka fikarohana fotsiny izany na fampitana hafatra amin'ny doka. Misy fiteny fitenenana manokana - ny mamaky mores ary kitiho raha hijery - ao amin'ny doka adinao dia ilaina mba hahazoana ny tsindrio. Rehefa dinihina tokoa, dia tsy maintsy mahazo ny tsindry dokambarotra alohan'ny ahazoanao ny fiovam-po atolotra.
Izany no Meta
Ao anatin'ny vanim-potoana tsy firaharahiantsika ireo fambara tranokala fehezin'ny mpampiasa mahazatra isika, toy ny famaritana meta, lohatenin'ny pejy ary lohanteny lohateny. Tsy ampy ny nanoratan'i Google mazava ny fomba fampiasan'ireto famantarana ireto hanomezana laharana ny tranonkalantsika, fa ireo fambara tsy raharahaintsika matetika ireo dia mandaitra ihany koa amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa anao - sy ny bokinao.
[box type = "fahombiazana" align = "" class = "" width = "90%"]Tsiambaratelo: Ny fampiasana araka ny tokony ho izy dia tsy tena mampisondrotra ny famantarana SEO anao, fa ny tsy fisian'izy ireo kosa dia famantarana mazava tsara fa tsy miraharaha ny tranokalanao ary tokony tsy raharahian'ny motera fikarohana. [/ Boaty]
Saika ny mpanjifa sy ny vinavina rehetra tonga eo am-baravaranao no manana an'ity olana iraisana ity: voahitsakitsaka ny angona meta-ny. Screwed = tsy hita, lava loatra, atiny duplicate na diso fotsiny. Fa maninona no olana izany? Satria misy fiatraikany lehibe amin'ny filaharana, ny fivezivezena ary ny fiovam-po.
Fantatro izay lazainao. Mandrosoa, Ramatoa. Google dia efa nilaza fa tsy mampiasa famaritana meta ho an'ny laharam-pikarohana. Ary marina ny anao. Saingy ny zavatra heverin'i Google dia ny tahan'ny tsindry avy amin'ny motera fikarohana mankany amin'ny pejinao - sy ny iray ary ny fifehezana tokana anananao momba izany dia ny lohateny sy ny famaritana anao. Ireo fambara ireo dia antso mazava ho an'ny hetsika ataon'ny prospect, mpitsidika tranokala mety ary ny varotra manaraka.
Mbola tsy resy lahatra? Andramo ity raha ny habeny - raha toa ny mpanjifa lozisialy, nampitombo ny tahan'ny click-through (CTR) avy amin'ny Google ka hatramin'ny 15% ny Element Three - tamin'ny fanavaozana ny lohateny sy ny famaritana ihany. Tsy izany ihany - ity misy lisitr'ireo metrika manan-danja 5 izay nohatsaraina tamin'ireto ihany
Clicks - nanatsara 7.2%
CTR - nanatsara 15.4%
Isan'ny mpitsidika - nanatsara 10.4%
Isan'ny mpitsidika vaovao - nanatsara 8.1%
Taham-pamoahana - nanatsara 10.9%
[box type = "note" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]Ny lesona: ajanony ny fanaovana tsinontsinona ireo mari-pamantarana tranonkala eo amin'ny fifehezana anao - eny fa na dia ireo "meta" miafina aza. Zava-dehibe amin'i Google izany. Zava-dehibe amin'ny mpampiasa azy ireo izany. Tokony ho zava-dehibe aminao izany. [/ Efajoro]
Ny hetsika ara-tsosialy amin'ny Arivotaona
Ny tsiambaratelo dia mivoaka amin'ny fiaraha-monina - misy sary mahazo sary bebe kokoa ny tiany ary bebe kokoa ny retweet noho ireo tsy misy.
Ary ireo sehatra ara-tsosialy farany dia saika sary avokoa, manomboka amin'ny Instagram ka hatrany amin'ny Tinder.
Fa firy ny fotoana laninao rehefa avy naka sary tonga lafatra ianao mba handrafetana hafatra toy izany koa? Ilaina ny famoronana fahamehana sy ny hetsika amin'ny haino aman-jery sosialy, ary ny CTA vita tsara dia tokony ho ny fiandohana fa tsy ny farany.
Diniho izay tianao hataon'ny mpampiasa, ny fomba tianao anaovan'izy ireo izany, ary oviana. Hamarino tsara fa mifanaraka amin'ny lafiny iray izy ireo - na manao ahoana na manao ahoana ny fanisana ny toetranao.
Mazava ho azy, afaka mamorona hetsika amin'ny sary sy horonan-tsary koa ianao. Sarin'ireo vokatra vaovao, olona manokatra fonosana, endrika vaovao mamiratra - mitohy hatrany ny lisitra ho an'ny sary mahomby.
Ny vidéo dia manolotra fotoana bebe kokoa hivarotana ny tenanao amin'ireo vinavinanao. Ampidiro ny antso-ho-hetsika mazava ao amin'ny sonian'ny horonantsary sy ny veloma. Ampahafantaro ny mpampiasa fa miahy anao izy, eo ianao ary vonona hamaly.
Ataovy ambony sy tery izany
Farany, tadidio fa ao amin'ny tontolon'ny finday ianao. Ny tsotra dia tsy midika hoe kely kokoa ny atiny - fa tsy dia mitabataba kely eo anelanelan'ny mpampiasa anao sy ny tanjona faratampony. Ampiasao aloha sy matetika ny antsonao hihetsika. Matetika loatra isika dia milevina ny bokotra, ny teny fihetsika ary ny karama be any amin'ny faran'ny pejy.
Aleo antoka fa ny quid pro quo dia eo anoloana sy eo afovoany - na farafaharatsiny ambonin'ny vala. Tazomy hatramin'ny farany ny fandefasan-kafatrao. Mampiasà matoanteny mihetsika toy ny mianatra, mamaky, ary miantso, ary tongava haingana amin'ny hena atolotrao. Azonao atao sy tokony hampiasa ireto torolàlana ireto amin'ny ohatra CTA etsy ambony - sora-baventy, bokotra, karoka be karama (tolotra avo lenta amin'ny zavatra kely kokoa - raha tsy mandresy ianao dia tsy mendrika ny tolotra amin'ny…), doka sy horonan-tsary aseho sy karama, horonan-tsary , fandefasan-kafatra ara-tsosialy ary ny mombamomba anao.
Ento misotro rano ny mpanoratra anao, omeo azy io fampiroboroboana mendrika azy io, ary andehana miasa - ampiasao tsara ny teninao. Ny antso ataonao sy ny mpanjifanao dia ho tia anao hiverina.
Tags: miantso amin'ny asaantso hanao hetsika
Dustin dia mitarika amin'ny paikady nomerika ho an'ny Element Three, manararaotra ny zavatra niainany nihazakazaka nanao fampielezan-kevitra amin'ny Internet ho an'ny Fortune 500 sy ireo orinasa kely eo an-toerana.
Famokarana atiny nomerika: Inona ny vokatra farany?
Ireo fironana 4 misy vokany be indrindra amin'ity taona ity amin'ny atiny nomerika
Oct 2, 2015 amin'ny 5: 05 AM
Misaotra @marketingtechblog sy @dustinclark torohevitra tena mahasoa. Miaraha manaiky indrindra amin'ny fanehoan-kevitra momba ny data meta. Araka ny fantatrao ny data meta (ohatra ny tranokala) dia ny dika mitovy amin'ny doka nojerena amin'ny alàlan'ny motera fikarohana. Raha izany dia tokony arahana tsara sy foronina toy ny kabary tamin'ny filoham-pirenena. 🙂 Araka ny voalazanao fa ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mety mandresy eo noho eo. Ao amin'ny Altaire izahay dia miara-miasa amin'ireo mpivarotra mailaka amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo mailaka Krismasy amin'izao fotoana izao izay manampy amin'ny fanomanana sy fitsapana ny zava-mitranga rehetra. Fa raha vonona ny tranokala ho very maina koa ny fotoana mety. Handeha amin'ny toro-hevitrao aho.